Nbudata Douglas C-133B Cargomaster Reworked 2.0 FSX & P3D - Rikoooo
downloads 5 120
Nlere nke Tim Conrad Nchịkọta ụmụ amaala sitere na LLS. Ihe ngwugwu nke Andiroto dere
Nke a bụ Douglas C-133B Cargomaster nke Tim Conrad mepụtara ma rụgharịa ya na Andiroto (ụdị 2.0)
Ntughari ohuru nke ihe eji eme ihe banyere FSX site na LLS nwere "moder engineer mod". Onye dere akwụkwọ ngwungwu a rụgharịa ọrụ dị n’elu na 2D panel nke injin ụgbọ elu ma gbakwunyekwu ọkụ na ọkụ ọkụ. Ntugharị nke ụfọdụ ihe ọkụkụ na VC, Imeziwanye akparamagwa ụgbọ elu, gbakwunyere na akụkọ akụkọ atọ. Gụọ faịlụ "Gụọ m" maka ozi ndị ọzọ.
Ejiri ya na akpukpo ukwu, 2D panel, ihe obibi anọ, TCAS panel, ụda ahaziri iche, enyemaka nke injin ụgbọ elu (mepee FE panel, wee pịa bọtịnụ "FE Sound") na ala aka nri, ị kwesịrị ịnụ "Nnabata bọọdụ, onyeisi! ")
n'ihi na FSX + Nnabata na dakọtara Prepar3D v4.
Douglas C-133 Cargomaster bụ ụgbọ elu ndị agha America na-ebu. Ezubere ya maka ibugharị bọmbụ bọọlụ intercontinental ballistic (ICBM), C-133 Cargomaster bụ ụgbọelu ebu ibu nke abụọ kachasị na USAF.
Onye edemede: Ihe osise nke Tim Conrad. Nchịkọta ụmụ amaala sitere na LLS. Ihe ngwugwu nke Andiroto dere